မိန်းကလေးတွေ အပေါ် Gentlemen ဆန်စွာပြုမူလေ့ရှိတဲ့ GOT7 ရဲ့အပြုအမူများ | News Bar Myanmar
မိန်းကလေးတွေ အပေါ် Gentlemen ဆန်စွာပြုမူလေ့ရှိတဲ့ GOT7 ရဲ့အပြုအမူများ
GOT7 အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ သွက်လက်ပြီး ဟာသဉာဏ်ရွှင်တဲ့ သူတွေဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်အများအပြားက ချစ်ခင်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ပရိသတ်တွေကို အချစ်ပိုစေတာကတော့ GOT7 အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ကြင်နာတတ်တဲ့ အပြုအမူတွေကြောင့်ပါ။
အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေအပေါ် အလေးထား ကြင်နာတတ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးသွားမှာတွေကတော့ မိန်းကလေးတွေအပေါ် Gentlemen ဆန်စွာပြုမူပေးခဲ့တဲ့ GOT7 ရဲ့ အပြုအမူတွေထဲက အချို့ပါ။
1. Irene ( Red Velvet) ကို ကူညီပေးခဲ့တဲ့ Jinyoung
၂၀၁၉ ရဲ့ KBS Song Festival မှာ Jinyoung နဲ့ Irene ဟာ ပွဲရဲ့ MC အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲရဲ့ စင်အောက်မှာ Irene ဟာ သူမရဲ့ ဂါဝန်ရှည်ကို ပြင်ဆင်ဖို့လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။
အဲ့အချိန်မှာပဲ Jinyoung ဟာ Irene နဲ့ ကင်မရာတွေကြား ဝင်ရပ်ပြီး Irene ကို ကင်မရာတွေမရိုက်မိပဲ သက်တောင့်သက်သာ ပြင်ဆင်လို့ရအောင် ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။
2. ပရိသတ်တစ်ယောက်ကို တွန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ထိပ်တိုက်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ Jackson
ဒါကတော့ GOT7 Music show တစ်ခုကို သွားခဲ့တဲ့အချိန် မှာဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ အဆောက်အအုံထဲကို ဝင်ဖို့သွားနေတဲ့ GOT7 ပတ်ပတ်လည်မှာ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေဝိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုအရှုပ်အထွေးကြားမှာ Cameramen တစ်ယောက်က မိန်းကလေးပရိသတ်တစ်ယောက်ကို တွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို သတိပြုမိခဲ့တဲ့ Jackson ဟာ Cameramen ဆီသွားပြီး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဒီလိုတွန်းထုတ်တာဟာ မဖြစ်သင့်တဲ့ အကြောင်း ဒေါသထွက်စွာနဲ့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
3. ပရိသတ်တစ်ယောက်ကို သူမရဲ့ ထိုင်ခုံထိ လိုက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ JB
ဒါကလည်း JB ရဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ကူညီခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်များစွာထဲကမှ တစ်ခုပါ။ JB ဟာ ပွဲတစ်ခုမှ စင်အောက် ပြန်ဆင်းဖို့လုပ်နေတဲ့ ပရိသတ်ကို စင်အောက်ထိ လိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။
4. Concert တစ်ခုမှာ ပြောခဲ့တဲ့ Mark ရဲ့စကား
GOT7 ရဲ့ concert တစ်ခုမှာတော့ Mark ဟာ ပွဲလာကြည့်တဲ့ ပရိသတ်ထဲမှာ ယောကျ်ားလေးတော်တော်များများ ရှိနေတာကို သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာMark ပြောခဲ့တာကတော့ ” တကယ်လို့ မင်းတို့သာ ရည်းစားကောင်မလေးကို အဖော်ပြုပြီး လာခဲ့တာဆိုရင်တော့ သူတို့စိတ်မဆင်းရဲအောင် ဂရုစိုက်ပေးပြီး စကားနားထောင်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပရိတ်သတ်ဖြစ်​တဲ့ သူတို့ကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားပေးပါ။ ” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
5. အိမ်ပြန်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်ကို ကူညီခဲ့တဲ့ Youngjae
GOT7 ရဲ့ပရိသတ်တစ်ယောက်ဟာ GOT7 Fanmeeting တစ်ခုကို တက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက် အိမ်ပြန်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သူမဟာ GOT7 ရဲ့ Official fancafe မှာ “ကျွန်မနေတာ Gyeonggi ဒေသမှာပါ။ ခု ဒယ်ဂူကိုလာတာပထမဆုံးပါပဲ။
ကြောက်လိုက်တာ” ဆိုပြီး ရေးတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကိုတွေ့သွားခဲ့တဲ့ Youngjae က ကိုယ်တိုင်ပဲ သူ ရထားအချိန်ဇယားကို ရှာပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း Reply ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ များမကြာမီမှာပဲ ထပ်ပြီး Youngjae က “၆ နာရီ ၄၂ မိနစ်မှာ ရထားတစ်စီးလာလိမ့်မယ်။
ခုံလွတ်တွေလည်းရှိတယ်။ ခုပဲ ရထားဘူတာကိုသွားပါ။ပီးတော့ စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း ပူပူနွေးနွေးတစ်ခုကို ဝယ်သောက်နေပါ “ဆိုပြီး reply ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင် Fan တွေကို ဂရုစိုက်တတ်တာပါလဲ။
6. ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့် တောင်းခဲ့တဲ့ Bam Bam
တစ်ခါတုန်းက ပရိသတ်တစ်ယောက်က Bam Bam ကို ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲ့ဒီ့ ပရိသတ်ရဲ့ ဘေးမှာ သူမရဲ့ အမျိုးသားရှိနေခဲ့တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် Bam Bam ဟာ သူမရဲ့ အမျိုးသားထံမှာ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ခွင့် ပေးနိုင်မလားဆိုပြီး ခွင့်ပြုချက် တောင်းခဲ့ပါတယ်။
7. လက်တွဲ ကူညီခဲ့တဲ့ Yugyeom
အငယ်ဆုံးလေး Yugyeom ဟာလည်း ကူညီတတ်တဲ့သူပါ။ သူ့ရဲ့ ကြင်နာတတ်တဲ့ ပု့ရိပ်တွေကို Law of the Jungle အစီအစဉ် မှာလည်း မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ လမ်းကြမ်းလျှောက်ရတာ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ Han Bo Reum ကို လက်တွဲကာ ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။
8. ပရိသတ်တွေကိုမိုးကာဖို့ သူတို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ Jacket တွေပေးခဲ့တဲ့ GOT7
ဒါကတော့ Fanmeeting တစ်ခုမှာ ရုတ်တရက် မိုးရွာခဲ့စဉ်က ဖြစ်ရပ်ပါ။ GOT7 အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကို မိုးဒဏ်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ Jacket တွေကို ချက်ချင်းပဲ ချွတ်ပီး ပရိသတ်တွေကို အုပ်မိုးပေးခဲ့ ဖူးပါတယ်။
ဘယ်လောက်တောင် ယောကျ်ားပီသလိုက်တဲ့ အပြုအမူတွေပါလဲနော်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း Ahgase လေးတွေရဲ့ အသဲကျော်တွေ ဖြစ်နေကြတာပေါ့။
Next လူမြင်ကွင်းကနေ ပဟေဠိဆန်ဆန်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ကြတဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင်များ »
Previous « ကြည့်လိုက်တာနဲ့ Fangirl လုံးလုံး ဖြစ်သွားစေမယ့် တရုတ် Bromance ဇာတ်လမ်းတွဲများ